UmThetho osayilwayo weNgxowa-mali kaMongameli weeNgxelo - Iinjongo kunye nobuLungisa
Iinjongo kunye noMthetho
Kwinqaku le- Imperial Presidency 101-i-Unitary Executive Theory , i-Civil Liberties Guide I-Tom Head ibhekisela kwiingxelo zokungena komongameli njengamaxwebhu "apho umongameli ebonisa umyalelo osesikweni kodwa uchaza nokuba yiyiphi inxalenye yesilwayo enenjongo yokunyanzelisa." Ekubeni ubuso balo, obuvakalayo buhlungu. Kutheni na ukuba iCongress ihambe kwinkqubo yomthetho ukuba ngabaongameli banokubhala kwakhona ngokubhaliweyo imithetho eyenzayo?
Ngaphambi kokuba ubagwebe ngokucacileyo, kukho ezinye izinto ofuna ukuba wazi malunga neengxelo zokusayina komongameli.
Amandla omthetho kaMongameli wokukhupha izityikityi zokutyikitya zisekwe kwiSiqendu II, Icandelo 1 lomgaqo-siseko wase-US, othi umongameli "uya kuthatha ingqalelo ukuba iMithetho iphunyezwe ngokuthembeka ..." Izitatimende zokutyikitya zibhekwa njengendlela enye umongameli wenza ngokunyanisekileyo imithetho ebekwe yiCongress. Olu ngcaciso luxhaswa yiNkundla ePhakamileyo ye - US ye- 1986 kwisigqibo seBowsher v. I-Synar , eyathi "... ukutolika umthetho owenziwe yiCongress ukuphumeza isigunyaziso somthetho yiyona nto ibalulekileyo 'yokusetyenziswa' komthetho. "U
Iinjongo kunye nomphumo wokutyikitya iingxelo
Ngomnyaka we-1993, iSebe lezoBulungisa lizama ukuchaza iinjongo ezine zokutyikitya komongameli kunye nomgaqo-siseko womthetho ngamnye:
Ukucacisa nje into eyayilwayo ngayo kwaye iya kubazuzisa njani abantu: Akukho mpikiswano apha.
Ukuyalela i- Arhente yeNtloko yeSebe eliLawulayo malunga nendlela okumele ilawulwe ngayo umthetho: Oku kusetshenziselwa ukutyikitya izitatimende, kutsho iSebe lezoBulungisa, ngumgaqo-siseko kwaye lixhaswa yiNkundla ePhakamileyo kwiBowsher v . Amagosa eSigqeba esiGqeba aphethwe ngokomthetho ngokutolika okuqulethwe kwingxelo yomongameli.
Ukuchazwa ngombono kaMongameli womgaqo-siseko womgaqo-mthetho: Iingxabano ezingaphezulu kwezo zibini zokuqala, ukusetyenziswa kwetatimende lokutyikitya kubonisa ubuncinane ubuncinane kwezinto ezintathu: ukuchonga imeko ethile apho umongameli ecinga ukuba zonke okanye iinxalenye zomthetho kulawulwa ngokungahambisani nomthetho; ukuyibeka umgaqo ngendlela "eya kusindisa" ukuba ibhengezwe ngokungahambisani nomgaqo-siseko; ukuchaza ukuba umthetho wonke, ngombono kaMongameli, ungekho mgaqo-siseko uthatha igunya lakhe kwaye uya kukwenzela ukunyanzelisa.
Ngokulawulwa kweRiphabliki kunye neDemocratic, iSebe lezoBulungisa liye lacebisa njalo abaongameli ukuba uMgaqo-siseko ubapha igunya lokungafuni ukunyanzelisa imithetho ekholelwa ukuba ayihambisani nomgaqo-siseko, kwaye ukuvakalisa iinjongo zabo ngokubhaliweyo kwesitatimende kukusebenza ngokusemthethweni kwegunya lawo .
Ngakolunye uhlangothi, bekuye kwaxelwa ukuba ngumsebenzi womgaqo-siseko womongameli we-veto kwaye wenqaba ukutyikitya iindleko ezikholelwa ukuba azihambisani nomgaqo-siseko. Ngowe-1791, uTombert Jefferson , njengoNobhala weSizwe wokuqala, ucebisa uMongameli uGeorge Washington ukuba i-veto "likhuselo elinikezwe ngumgaqo-siseko ukukhusela ukuchaswa kwelo mthetho [ka-1.] ngamalungelo eSigqeba esingu-2. IiNkundla zeeNkundla zikaRhulumente 3. zelizwe kunye namaziko omthetho. "Enyanisweni, abaongameli abadlulileyo kuquka uJefferson noMadison baye bavusa iindleko kwiimfuno zomgaqo-siseko, nangona baxhasa iinjongo zeenqwelo-mali.
Ukudala uhlobo lomthetho wezomthetho ojoliswe ukuba usetyenziswe yiinkundla ngokuchazwa komthetho: Ukugxeka njengomzamo umongameli ukuba angene empini yeCongress ngokuthatha inxaxheba esebenzayo kwinkqubo yokwenza umthetho, oku kucacile ukuba inokuphikisana nayo yonke into esebenzayo yokutyikitya iingxelo. Umongameli, bathetha, bazama ukuchibiyela umthetho ogqitywe yiCongress ngokusebenzisa lolu hlobo lokutyikitywa kwengxelo. Ngokutsho kweSebe lezoBulungisa, isitatimende somthetho esisayinwe ngumthetho senziwa kwi-Reagan Administration.
Ngomnyaka we-1986, ngoko-i-Attorney General Meese yangena ilungiselelo kunye ne-West Publishing Company ukuba ibe neengxelo zokusayina komongameli ezipapashwe ngokokuqala ngqa kwi-US Code Congressional and Administrative News, ukuqokelelwa kwemigangatho yomthetho.
Igosa likaGeneral General Meese lichaze injongo yezenzo zakhe ngale ndlela: "Ukuqinisekisa ukuba ukuqonda kukaMongameli ngokwaloo nto ibhaliweyo kuyafana okanye kunikwa ingqwalasela ngexesha lokwakha umthetho ngokomthetho kamva, inkundla Ngoku ihlelwe ngeNkampani ye-West Publishing ukuba isitatimende sikaMongameli ngokusayinwa kwebhili-mali siya kuhamba nomlando wezomthetho kwiNgqungquthela ukuze zonke zifumaneke enkundleni yokwakhiwa kwexesha elizayo yintoni loo miselo ithetha ngayo. "
ISebe lezoBulungisa libonelela ngeembono ezixhasa kunye nokugweba iingxelo zokusayina komongameli apho kubonakala ngathi abaongameli bathatha inxaxheba ebalulekileyo kwinkqubo yokwenza umthetho:
KwiNkxaso yeeNkcazo zokuTyikitya
UMongameli unelungelo lomgaqo-siseko kunye nepolitiki yokudlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yomthetho. Isiqendu II, iCandelo 3 loMgaqo-siseko lifuna ukuba umongameli "uya kukhuthaza ukuba ngamaxesha onke athethelele [iCongress '] Ukuqwalasela loo Milinganiselo njengoko uya kugweba okuyimfuneko kwaye kuyimfuneko." Ukongezelela, iCandelo 1, iCandelo 7 lifuna ukuba ube ngumthetho kunye nomthetho, umyalelo osayilwayo ufuna umqondiso wongameli.
"Ukuba [umongameli] uyavuma ukuba uyayigininisa, kodwa ukuba akayi kubuyisela, kunye neNqabana yakhe kwiNdlu apho iya kubakho."
Ngokwakhe ebizwa ngokubanzi "UMongameli waseMelika," 110 (2 ngo-1960), umbhali uClinton Rossiter, ubonisa ukuba ngokuhamba kwexesha, umongameli ube "uhlobo lwenkulumbuso okanye 'iNtlu yeNdlu yeNdwendwe.' [H] e kulindeleke ukuba benze iingcebiso ezicacileyo ngendlela yemilayezo kunye neendleko ezicetywayo, ukuba zibukele ngokusondeleyo kwinkqubela yabo ephantsi kunye nekomiti kwindlu nganye, kwaye ukusebenzisa zonke iindlela ezihloniphekileyo ngaphakathi kwamandla akhe ukukholisa ... iCongress ukumnika into ayifunayo kwindawo yokuqala. "
Ngaloo ndlela, iphakamisa iSebe lezoBulungisa, lingenokuba ngumphathiswa ofanelekileyo, ngokubhalisa izitatimende, ukuchaza ukuba injongo yakhe (kunye neCongress ') yayikukwenza umthetho kunye nendlela eya kuphunyezwa ngayo, ingakumbi ukuba ulawulo luvela kwimithetho okanye wadlala indima ebalulekileyo ekuhambiseni iCongress.
Iingxelo ezichasayo zokuTyikitya
Ingxabano ngokumelene nomongameli usebenzisa izitatimende zokutyikitya ukuguqula injongo yeCongress malunga nenjongo nokuthotyelwa kwemithetho emitsha iphinda isekelwe kumgaqo-siseko. Isiqendu 1, iSigaba 1 sichaza ngokucacileyo, "Yonke inikwe amandla ePhalamende apha iyakunikwa kwiNgqungquthela yase-United States, eya kuba ne- Senate kunye neNdlu yabameli ." Kungekho kwiSenethi kunye neNdlu kunye nomongameli .
Phakathi kwendlela ende yokuqwalasela ikomidi, ingxoxo yomgangatho, ukuvota kwamavoti, iikomiti zenkomfa, ingxoxo eninzi kunye namavoti amaninzi, iNkongoma yodwa idala imbali yowiso-mthetho. Kwakhona kungatsholwa ukuba ngokuzama ukubuyisela kwakhona okanye ukuphazamisa iziqendu zebhilikhi athe watyikitya, umongameli usebenzisa uhlobo lwe-veto yecandelo, amandla angakhange anikezelwe ngameli.
Ukusetyenziswa kwangoku kweengxelo zokusayina kukaMongameli ukulungiswa komthetho ogqitywe yiNgqungquthela kuyaqhubeka kungquzulana kwaye ngokuqinisekileyo akukho ngaphakathi kwamandla anikwe umongameli kuMgaqo-siseko. Eminye imisebenzi engabandakanyekanga yokutyikitya ingxelo ivumelekile, inokukhuselwa phantsi komGaqo-siseko kwaye inokunceda ekulawulweni kwexesha elide kwemithetho yethu. Njengawo nawaphi na amanye amandla, nangona kunjalo, amandla okutshintshwa kwengxelo yomongameli angasetyenziswa kakubi.
IYunivesithi yaseWisconsin-Milwaukee Admissions
Ukuba bobabini 'En' kunye 'Dans' basho 'Ngaphakathi,' Uwasebenzisa njani?